सासुको खुट्टा नढोग्ने महिलाले श्रीमानको बिस्तारामा किन जाने ? - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २६, २०७३ समय: १५:२९:५९
जब पर्खालले नछोपिने दृश्यहरु बिचारका धर्काहरुले छोपिदिन्छन तब मस्तिष्कहरु भ्रमित हुन्छन् ।’ त्यस्तै नेपालीको धर्म, कर्म र संस्कारलाई पाखा लगाएर आमा समानकी सासु आमालाई किन ढोग्ने भनेर आफुलाई अपमानित सोच्ने कलियुगका बुहारीहरु कुर्लन्छन तब सोच्नुस त्यहि नारी श्रीमानको बिस्तारामा किन जाने गर्छन ? केहि दिन अघि एक महिलाको आर्टिकल अनलाइनमा आयो मैले सासुको खुट्टा किन ढोग्नु भनेर जसले मलाई बडो अचम्मित तुल्यायो । त्यसकारण यहाँ मैले सर्वप्रथमत मैले अहिलेका उत्ताउला र उरनठाउला बुहारीहरुलाई नमस्कार गर्नु र ढोग्नुको परिभाषा बुझाउन उचित ठाँने ।
आफु भन्दा ठुलो लाई कसरी आदर गर्ने भन्ने बिचारलाई भष्म पार्ने सोच वास्तममै आप्पतिजनक छ । धन्दा मान्नु पर्दैन जस्तो फल रोप्नु हुन्छ त्यस्तै फल फल्छ । अझ रासायनीक मल परे पछी त अझ त्यो भन्दा नी उन्नत फल्छ । देखावटी ढोग मात्र हो सधै हृदय बाट ढोग कार्य राम्रो गर त्यो नै सबै भन्दा ठूलो ढोग र धर्म हो तपाईं पनि सासू बन्नु हुन्छ । अनिवार्य छैन सासु वा कसैको खुट्टा ढोग्न । तर सासु आमा सरह माननीय हो, पूज्यनीय हो । यसैले सासुलाइ आदर गर्नुहोस । आदर, गौरवमा श्रद्धा हुन्छ । बुद्ध शिक्षामा श्रद्धालाइ कुशल चित्त मानिन्छ । आफु भन्दा ठुला बड़ा बृद्ध हरुलाई ढोग्नु र आशिर्वाद लिनु राम्रै हो ।नेपालपार्टीकाे सहयाेगमा